Bọọlụ Valve, Nyochaa Valve, Ọnụ ụzọ ámá - Newsway
Ejiri ego ígwè
Anyị ipuiche bọl valves, ọnụ ụzọ ámá valves, ego valves, ụwa valvụ, urukurubụba valves, plọg valvụ, strainer, akara valves. Ngwaahịa
API 6D, API 607, OA, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Ọ bụrụ na ịchọrọ asambodo anyị, biko kpọtụrụ anyị sales@nswvalve.com )
Pulp ụlọ ọrụ na Akwụkwọ
CHEMICAL NA PETROCHEMICAL
Newsway Valve Co., Ltd. bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe valves emeputa na ekspootu ihe karịrị afọ 20 akụkọ ihe mere eme, na nwere 20,000㎡ nke kpuchie ogbako. Anyị na-elekwasị anya na imewe, ịzụlite, rụpụta. Newsway valvụ na-nditịm dị ka mba quality usoro ọkọlọtọ ISO9001 maka mmepụta. Ngwaahịa anyị nwere usoro ihe eji enyere kọmputa aka na kọmpụta kọmputa dị iche iche na mmepụta, nhazi na nnwale. Anyị nwere ndị ọrụ nyocha nke anyị iji chịkwaa njiri mara mma, ndị nyocha anyị nyochara valvụ ahụ site na nkedo mbụ ruo ngwugwu ikpeazụ, ha nyochaa usoro ọ bụla na mmepụta. Anyị na-arụkọ ọrụ na ngalaba nyocha nke atọ iji nyere ndị ahịa anyị aka ilekọta valvụ ahụ tupu ebupu.
AKW VKWỌ VALVE Nrụpụta ISO9001 Nhazi usoro nhazi AKW PRKWỌ AKW PRKWỌ MGBE Ahịa ahịa
Ọkachamara valvụ emeputa
Waylọ ọrụ Newsway Valve na-arụ ọrụ mmepụta ihe maka ihe karịrị afọ 20 ma nwee ahụmịhe bara ụba na imepụta valve na mmepụta. Companylọ ọrụ anyị na -emepụta nrụpụta na akụrụngwa na-arụ ọrụ oge niile iji hụ na ịhazi arụmọrụ ngwaahịa yana arụmọrụ.
Jighi quality njikwa usoro
Dị ka usoro njikwa njikwa mma nke ISO9001 si kwuo, Newsway Valve Company na-achịkwa ọ bụla site na nkedo valvụ ka ọ bụrụ nzukọ, eserese, na nkwakọ ngwaahịa iji hụ na ezigara valvụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ 100% tozuru oke.
Newsway valvụ Company na-onwem na mmepụta ngalaba, teknuzu ngalaba, ahịa ngalaba, àgwà ngalaba, akwụkwọ ngalaba, ego ngalaba na mgbe-sales ngalaba na-eje ozi ahịa mma na ngwa ngwa.
Newsway Valve Company na-ekwe nkwa na: Ọ bụrụ na ndị ahịa achọta nsogbu ogo ngwaahịa, anyị ga-enyere ndị ahịa aka iweta ọrụ mmezi ma ọ bụ dochie anya n'efu. Nyere ndị ahịa aka ịnagide nsogbu ọsọ ọsọ